ဒီထက်တော့ လျော့မရဘူးဗျို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဒီထက်တော့ လျော့မရဘူးဗျို့
Posted by naywoon ni on Dec 19, 2011 in Cultures, Drama, Essays.., My Dear Diary | 16 comments
ကဗျာ ခံစားခြင်း တစ်ပိုဒ်ကို
မနေ့က ဖတ်မိတဲ့ကဗျာလေးပါ….။ ဖတ်မိသူတွေကတော့ ဘယ်လိုခံစားမိသလဲ မပြောတတ်ဘူး….။ နေ၀န်းနီကတော့ အဲဒိကဗျာလေးကို ဒီလိုလေး ခံစားလိုက်မိတယ်…။ ကဗျာရေးတဲ့သူကိုလည်း မသိပါဘူးနော် ..။ ပြိးတော့ နေ၀န်းနီဆိုတဲ့ကောင်က ကိုယ့်ဟာကိုသာ ကဗျာရေးတာ သူများရေးတဲ့ ကဗျာ ပထမတစ်ပိုဒ်လောက်ဖတ်ကြည့်ပြီး တော်ရုံတန်းရုံ အရေးလောက်နဲ့ ဆက်ဖတ်မရတတ်…။ တစ်ချို့ကဗျာတွေကျတော့ အတွေးလေးကောင်းချင်ပါရဲ့….။ အသံက တစ်ပြေးတည်းသွားနေတော့ ဖတ်ရတဲ့သူငြီးငွေ့လာပြန်ရော….။ အဲဒိတော့ ကဗျာကို ထိထိမိမိ ရေးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ကဗျာ စာသားကို ကိုယ့် အသံထွက်ပြီးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ….။ ကဗျာဆိုတာ က၀ိ ပစ္စည်းလို့ပြောတာပဲ…။ ဘယ်နားက ကပြီးဘယ်နားမှာဝိရ သလဲ နေ၀န်းနီမသိပါဘူး…။ ရင်ခုန်ခံစားမိသလိုရေးလိုက်တာပါပဲ…။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုဆော်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာတော့ မရှိကြောင်းပါ…။ ဒါပေမဲ့ ရေးရင်း က ငြိသွား တာကတော့ မတတ်နိုင်ပါလေ………။ ကဲပါ……..စောစောက ကမ်းဂျီးရဲ့ ကဗျာလေးပြန်ကြည့်ရအောင်……..။
ကမ်းနဖူးလေးဆီကို ခေါ်သွားချင်တာတဲ့………။ ကြောက်စရာကြီးနော်…။ အချစ်ကျမ်းကျေတဲ့ သူများ သိပြီးသားပါ…။ အဲဒိကမ်းနဖူးမှာ ဘာရှိတယ်.. ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ……..။ အဟီး….။ ဟိုကောင်မလေးက သဘောမပေါက်ပဲ နေမလား…။ ပေါက်တာပေါ့…။ ဒါပေမဲ့ ဟင့်အင်း ကြောက်တယ် ဆိုပြီး အကြောက်အကန်းငြင်းဆိုပြီး လူရှင်းတဲ့ နေရာကနေ ကောင်လေးကို ပြန်ခေါ်ထုတ်လာတာ…။
လည်လိုက်တာ …. တဲ့…။ အဲဒိနေရာမှာ စာချောက်ရုပ်တွေက လည်သလား မလည်သလားတော့ မသိ…။ တစ်ခြား ပစ္စည်း တစ်ခုခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပေးရင် ပိုကောင်းမလားလို့…။
အံမယ် အံမယ် လာလာချည်သေးရဲ့…။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာကို ခေါ်သွားတာ ဖွက်ထားတဲ့ အိပ်မက်လေးပါတဲ့…။ ဖွက်ထားတယ်ဆိုတော့ သူက တွေ့အောင်ရှာခိုင်းမလို့ ပေါ့လေ…။ ဘယ်ရမလဲ ဟိုက လည်တာကို…။ ဘယ်ရှာပါ့မလဲ…။
အင်း ပါးကလေးပြန်မလေးလိုက်ပါဘူးလို့ ပြောတာလေတော့ ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ ပေါ့…။ တင့်တင့်ထွန်းသီချင်းဆိုပြသွားလေသလားတော့ မသိဘူး…။ ကြားဖူးလား “နမ်းမှာလား” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေ…။ ပါးလေးဖြေးဖြေးနမ်းပါ ကိုကိုရေ…။ ဒီထက်အဆင့်တက်မလာနဲ့ ဟိုးးး ဆိုတာလေ…….။
အဲ အဲဒါကတော့ မောင်ကမ်းဂျီးရဲ့ ဆင်ခြေ ဆင်လက်လေးပါပဲ…။ အားလုံး သိပ္ပံ ပညာ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဒီလောက်လေးတောင်မှ မလိုက်လျောနိုင်ဘူးလာပေါ့…။ ဒါဆိုရင်တော့ သူပြောချင်တာ တွေ ခြုံငုံလောက်မိပြီထင်ပါရဲ့…။ ကဗျာလေးက သည်းထိတ်ရင်ဖို လေးပါ…။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးက နဲနဲ လျော့ ကြပါဆိုလို့ ဒီထက်ပိုပြောရရင် မကောင်းလို့ ကဗျာလေး အကြောင်း ရိုးတိုးရိပ်တိတ် ခံစားပြလိုက်တာပါ…။ ဒီထက်တော့ လျော့လို့မရတော့ဘူးဗျို့…။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆက်လက် ခံစားကြည့်ကြပါတော့လို့……..။
ကျုပ် က တော့
ဒီမယ်ကိုနေ လျှော့ချင်ရင် အသာတကြည်လျှော့
ရောင်းသူ တစ်ဆယ် .. ဝယ်သူ ငါးကျပ် …ဒါဗြဲ….။
ကဗျာတွေဖတ်တော့လဲ ဘာမှန်းမသိ..ရေးတဲ့ဆရာတွေ ရှင်းပြပါဆိုတော့လဲ မော်ဒန်ကဗျာ ဘာညာ ဆိုတော့ သိပ်မမေးတော့ဘူး..ကိုလဲခံစားတက်သလိုခံစားလိုက်တယ်…………..အခုဒီကဗျာတော့ ကိုနေ ရှင်းပြမှပဲ………:(
မှတ်ချက် ။ ။ အောက်ပါအကြောင်းရာကို တပ်တွင်းအချုပ်ကျ ကြောင်ကြီး
( သတိ။ ။ တက်ထိုးရာကနေ တောက်တဲ့မဖြစ်စေနဲ့ )
ဂလိုကျလည်း ဟုတ်သဟ ကူးပြီဗျို့
အင်း ခုမှပဲ ကဗျာရဲ့ ရာဇ၀င်ကို ထိထိမိမိ ပိုပြီး မြင်ယောင်ခံစားမိတော့တယ်။ စာနဲ့ပေနဲ့ဝေးနေတော့လည်း နည်းနည်းတော့ မနောတို့က ပိန်းတယ်လေ….
ကိုနေကြီး အနက်ဖွင့်ဆိုလိုက်မှပဲ ….
သားကဗျာလည်း ညှိစော်လုံးလုံးကို နံရောခင်ဗျ …
သို့သော်လည်း ကိုနေကြီးအမြင်ကိုနေကြီးဖွင့်တာ ဂွတ်ပါတယ်
သား ခေါင်းစဉ်ကိုယ်က အချစ်ဦးလေးပါနော် ကိုကိုနေ……
“အရှေ့ဆို တောင်ပေါ်ထိပ်က၊ လိပ်ခွပ်လို့ သမင်သေ
သိကြားမင်းက မနေနိုင်၊ တုတ်ကို ကိုင်လို့လေးနဲ့ပစ်
ပေါင်မှန်လို့ မျက်စိကျိုး၊ သွားဟောက်တောက်ကန်း…..”.
ကို comegyi ရေ…………. ဆရာမောင်သာနိုး ရဲ့ ထင်းရူးပင်ရိပ်ကို ရှာဖတ်ပါ…။ ၀ါသနာရှင်ချင်း လက်တို့တာနော် ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး…။ အဲဒိစာအုပ်က မော်ဒန်ကဗျာကို ၀ါသနာပါသူတိုင်းအတွက် သမ္မာကျမ်းစာလောက်ကို အရေးကြီးပါတယ်…။ (မြန်မာမော်ဒန်ကဗျာကိုပြောတာပါ)
သူရို့ ..မော်ဒန်အချင်းချင်းတော့ ဟုတ်နေတာပဲ..
ကျုပ်လဲ မော်ဒန်နေ ရှင်းပြမှပဲ ပေါက်တော့တယ်ဗျို့ ..